कृषिमा राज्यको दायित्वबोधको खाँचो « Online Sajha
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी हुँदै गइरहेको छ । सन् १९३० को महामन्दीका कारण विश्वको आर्थिक क्षेत्र नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले फेरि त्यही अवस्था दोहोरिँदै गइरहेको छ । एयरलाइन्स, पर्यटन, होटल–रेस्टुरेन्ट, शिक्षा, खेलकुद, ट्राभल, चलचित्र उद्योगजस्ता मुख्य आर्थिक आधारहरू लगभग बन्द अवस्थामा नै छन् । यो महामारीको समयावधि निश्चित छैन । त्यसैले यी आर्थिक आधारहरू कहिले माथि उठ्ने हुन् ? केही निश्चित छैन ।
परिणाम यो भएको छ कि विश्वव्यापी रूपमा करोडौँ श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक अनुसार पनि अहिले विश्वव्यापी रूपमा ३८ प्रतिशत कामदारहरू अर्थात् लगभग सय करोड कामदारहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपरेको छ भने २ सय ७० करोड कामदारहरू गम्भीर प्रकारले प्रभावित भएका छन् । केही धनी देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आर्थिक राहत प्याकेजमार्फत सहयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशत अर्थात् लगभग २.३ ट्रिलियन डलर, जर्मनीले १ सय ८९ बिलियन डलर, चीनले १ सय ६९ बिलियन डलर, अस्टे«लियाले १ सय ३३ बिलियन डलर र भारतले आफ्नो जीडीपीको ०.८ प्रतिशत रकम आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर, खर्बौं रुपैयाँ विदेशी ऋण बोकेको नेपालले आफ्ना नागरिकलाई त्यसरी सहयोग गर्न सम्भव छैन । सहयोग गर्नु त टाढाको कुरा भयो, प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा लगभग ५७ हजार रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको अवस्था छ ।
विप्रेषणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म टेवा पुगेको थियो । तर, त्यस प्रकारको विप्रेषणमा पनि अब धेरै कटौती हुनेछ । देशका युवा शक्तिलाई विदेश पठाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको थियो तर विश्व महामन्दीले अब त्यस प्रकारको सहज स्थिति रहेन । यस प्रकारका आर्थिक स्रोतहरू धरासायी हुँदै जाने हो भने नेपाली जनताको भविष्य के होला ? परम्परागत राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा परिवर्तन नगर्ने त्यसको विपरीत ऋणमाथि ऋण थप्दै जाने हो भने देशको भविष्य के होला ? आफ्नो देशको कच्चा पदार्थ सस्तैमा विदेश पठाउने अनि विदेशमा निर्माण भएका महँगा सामान किन्नमा रमाउँदै जाने हो भने समाजवादको नाराको भविष्य के होला ?
यार्सागुम्बा र जडिबुटीबाट बनेका महँगा औषधिहरू खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ताहरू बाध्य हुनुपर्छ । हामीले सस्तो मूल्यमा बेच्ने अदुवा, भारत र युरोपेली मुलुक पुग्दा त्यसको मूल्य कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।
वर्तमान राज्य संरचना मातहतमा रहेर हुर्किरहेका किसानहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त ? किसान चरित्रको विशेषता हो –आफूमाथि आत्मनिर्भरताको भावनाको कमी र आफूमाथिको सत्ताको पूजा तथा त्यसका अगाडि आत्मसमर्पणको भावना । विभिन्न अलौकिक शक्तिहरूमाथि विश्वास गर्दै विभिन्न रुढीवाद र अन्धविश्वासको जालोमा फस्नु । भाग्य, कर्म, स्वर्ग र नर्कको संसारमा रमाउनु । यस प्रकारका नकारात्मक स्वभाव र संस्कृतिहरूका कारण पनि अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामाथि सशक्त धक्का पुग्न नसकिरहेको अवस्था हो । यस प्रकारका सांस्कृतिक जटिलता पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्नु तथा परनिर्भर अर्थतन्त्रको हालिमुहाली हँुदै जानुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो ।
विद्यमान विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक महामन्दीले थुप्रै श्रमिकहरूको कटौती हुने प्रस्ट नै छ । यस अवस्थामा विदेशमा श्रम गर्ने अत्यधिक नेपालीहरूको रोजगार गुम्ने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको नयाँ परिस्थितिमा हाम्रो श्रमशक्तिको मुलुकभित्र नै बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ । अहिले पनि पहाड तथा तराईका थुप्रै जमिन बाँझो छ । त्यसका साथै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर सिध्याइँदै छ । परम्परागत खेती प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याइनुपर्छ । थोरै मात्रामा हुने मालको उत्पादनलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियालाई बढाउने कोसिस गरिनुपर्छ ।
पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि नै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य संरचनामाथि सशक्त धक्का पुग्न सक्छ । यस अवस्थामा नै उत्पादनको प्रक्रियालाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि नै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य संरचनामाथि सशक्त धक्का पुग्न सक्छ । यस अवस्थामा नै उत्पादनको प्रक्रियालाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारको क्रान्तिलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने गरिन्छ । तर, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म उत्पादन वृद्धिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नै नसकिने हो त ? उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नै नसकिने हो त ? निर्णायक क्रान्ति अगावै केही गर्नै नसकिने हो त ? त्यसो पनि होइन ।
नेपालको भौगोलिक विविधता तथा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी कुन प्रकारको कृषि प्रणाली आवश्यकता हो ? यस विषयमा गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राज्य यस विषयप्रति गम्भीर नभएको अवस्था छ । बजेटको जम्मा ३ प्रतिशत मात्र कृषिमा छुट्याइन्छ, यसले पनि राज्यको झुकाव के हो ? आफैँ प्रस्ट हुन्छ । यस कारण पनि कृषिप्रति राज्यलाई दायित्वबोध गराउन जनस्तरबाट व्यापक जनदबाब तथा आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बनाऊ